भाइरल ज्वरो कसरी बच्ने | Sanklp Diary
Written on September 4, 2012 at 9:30 pm by sanklp
Filed under Health no comments
शरीरमा कुनै भाइरस वा ब्याक्टेरियाले आक्रमण गर्दा जीउले आफंै त्यसलाई मार्ने प्रयास गर्छ । यही कारणले शरीरले आपmनो तापक्रम समेत बढाउँछ । शरीरको तापक्रम सामान्यभन्दा बढ्ने यही प्रक्रियालाई हामी ज्वरो आएको भन्छौं । शरीरको तापक्रम ९८.३ डिग्री फरेन हाइटभन्दा बढी हुँदा ज्वरो आएको मानिन्छ । ज्वरो आफंैमा रोग होइन, रोगको लक्षण मात्र हो । प्रा. मिश्रका अनुसार कुनै पनि प्रकारको संक्रमणको बेला शरीरद्वारा दिइने प्रतिक्रिया नै ज्वरो हो र वृद्घ िभइरहेको ज्वरोको तापमानले रोगले बिरामीलाई च्याप्दै लागेको संकेत गर्छ ।
कुनै पनि भाइरसको संक्रमणले गर्दा हुने ज्वरो भाइरल ज्वरो हो । भाइरसको संक्रमणबाट हुने ज्वरो कति डिग्रीसम्म आउँछ भन्ने ठोकुवा गर्न सकिन्न ।
ज्वरोमा के हुन्छ ?
ज्वरो विषाणुको संक्रमणले हुन्छ । यस्ता विषाणुले शरीरको कोषिकामा पाइरोजेन नामको विषाक्त पदार्थ उत्पन्न गर्छन् । ‘यसले मस्तिष्कमा हुने ताप नियन्त्रण केन्द्र (हाइपोथेलमस) मा खराबी आउँछ र ज्वरोको अनुभव हुन्छ,’ मिश्र भन्छन्, ‘ज्वरोले रोगको कीटाणु समाप्त गर्न हामीलाई सहयोग गरिरहेको हुन्छ ।’ यो समय शरीरमा विभिन्न प्रकारका जैविक प्रक्रिया तीव्र गतिले हुने गर्छन् । र, कीटाणु समाप्त गर्न हामीलाई सघाउँछन् । तर लामो समयसम्म ज्वरो नघट्नु शरीरका लागि घातक हुन्छ । किनभने यो समय शरीरको भित्री खण्डको तापक्रम बढेर पानीको कमी हुन जान्छ । यसले गर्दा रगत र मूत्रनलीको कोषिका सुक्न थाल्छ र त्यसमा प्रोटिनको मात्रा कम हुन थाल्छ ।
बिरामीलाई स्वच्छ हावाको सञ्चार हुने कोठामा राख्नुपर्छ । तर धेरै चिसो वातावरणमा भने राख्नुहुन्न ।
बिरामीलाई प्रशस्त मात्रामा झोल तथा तरल पदार्थ खान दिनुपर्छ । यस्तै, शरीरलाई पर्याप्त मात्रामा क्यालोरी दिन ग्लुकोज, आरोग्यवर्धक पेयपदार्थ, फलफूलको रस आदि खुवाउनुपर्छ । सजिलै पच्ने खाद्यवस्तु (जस्तैः जाउलो, साउदाना, दूध, रोटी, ब्रेड आदि) खान दिनुपर्छ । पाचन प्रक्रिया जटिल हुने खालका भोजन भने नदिनु बेस हुन्छ ।
ज्वरो आउनासाथ बिरामीलाई छोपेर राख्ने चलनलाई औंल्याउँदै मिश्र बरु रोगीको शरीरबाट अनावश्यक लुगा हटाउन सल्लाह दिन्छन् । यस्तो अवस्थामा पातला सुतीका लुगा लगाउनु राम्रो मानिन्छ । आवश्यक भए वा बिरामीले रुचाए कम्बल ओढाउन सकिन्छ । तर रोगीलाई कम्बल वा न्यानो लुगाले बेर्नु भने हुँदैन ।
चिकित्सकको सल्लाहबिना एन्टिबायोटिक नखाने भाइरल ज्वरोले प्रभावित अधिकांशले औषधि पसलेले दिने एन्टिबायोटिक औषधि प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ । धेरैजसो भाइरल ज्वरो पीडितहरू एक/दुई दिनको उच्च ज्वरोपछि आत्तिएर औषधि पसल पुग्छन् र एन्टिबायोटिक औषधि सेवन गर्छन् ।
भाइरल ज्वरोमा चिकित्सकको सल्लाहमा मात्र औषधि सेवन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै डा. मिश्र आफंै वा पसललेको सल्लाहमा एन्टिबायोटिक औषधि सेवन नगर्ने सल्लाह दिन्छन् ।
पाँच दिनसम्म भाइरल ज्वरो आए पनि एन्टिबायोटिकको सेवन गर्नु नहुने औंल्याउँदै उनी उच्च ज्वरो आए सबैभन्दा पहिले चिकित्सककहाँ पुग्नुपर्ने सुझाउँछन् । पसलेले दिने गरेको एन्टिबायोटिकले गर्दा आमव्यक्तिमा यसप्रतिको प्रतिरोधक क्षमतामा वृद्घि भइरहेको अवस्था समेत उनी औंल्याउँछन् ।
कति बेला एन्टिबायोटिक ?
भाइरल ज्वरोको सुरुमै एन्टिबायोटिक औषधिको आवश्यकता पर्दैन । तर रोगीलाई यसपछि पुनः संक्रमण (सेकेन्डरी इन्फेक्सन) देखिए वा खकारमा पहेंलोपन देखिए एन्टिबायोटिकको आवश्यकता पर्छ । यस्तो अवस्थामा सिफारिस मात्रामा खान सकिन्छ ।
तत्काल चिकित्सककहाँ जाने—
सास फेर्न असजिलो भए
बच्चाले खाना नखाए वा स्तनपान नगरे
शरीरमा ठूला बिमिरा देखिए
घाँटीमा खसखस गरिरहे
रगत/म्युकससँगै झाडापखाला चले
पिसाब फेर्न अति पीडा भए वा तल्लो पेट वा कम्मरको एकापट्टि दुखिरहे
« « USB Powered Disc Destroyer
Bios Beep Code » »